Mmụta nkwalite mmụta anyị n'ịntanetị na-arụ ọrụ! - Nzuzo
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » DSA » Usoro mmụta anyị dị n'ịntanetị "Mmezi nke ọgụgụ" na-arụ ọrụ!
Ngụkwalite ọgụgụ ọgụgụ n'ịntanetị dị njikere ma enwere ike ịzụta taa!
You nwere ike ịchọta ya ebe a.
Ihe omume ahụ nwere ihe karịrị awa isii nke vidiyo na akụrụngwa na arụmọrụ dị mkpa iji melite ọsọ na izi ezi nke ọgụgụ, site na leta gaa na amaokwu. Can nwere ike ịgbaso usoro ahụ dịka usoro gị siri dị maka ọ ga-enweta ya ruo mgbe ebighi ebi.
Achọkwara m ikele ndị ọrụ ibe anyị bụ ndị jiri ihe vidiyo miri emi mepụta usoro ahụ.
- Imma Squicciarini (ọgwụgwọ dyslexia)
- Gabriele Bianco (DSA na asụsụ abụọ)
- Ivano Anemone (ebe nchekwa na ọgụgụ ọrụ)
Uru ihe dị n'ịntanetị bụ na a ga-emelite ya emelitere iji nọgide na - egosipụta ihe ọhụụ na arịrịọ gị. Ya mere, ana m arịọ gị ka ị jiri mpaghara nkọwa dị n'okpuru nkuzi ọ bụla iji rịọ ozi ndị ọzọ gbasara otu akụkụ.
Ọnụ ego ihe ọmụmụ ahụ bụ 65 € gụnyere VAT, mana ndị ọrụ ibe 180 dị na ndị so na ụdị "ndụ" ga-enweta dere maka nnweta n'efu. Tupu ịzụta, agbanyeghị, ị nwere ike ịlele ndepụta nke nkuzi na ụfọdụ vidiyo preview.
Nwere olileanya na ị nwere ike ịghọta ọrụ a! Njikọ iji banye ebe a bụ: https://trainingcognitivo.teachable.com/
Banye uzo ahu
dyslexia N'ezie, ọgụgụ nkwalite agụ, dyslexia, dsa, nkwalite ọgụgụ akwụkwọ, dyslexia ọgwụgwọ
Usoro mmụta anyị dị n'ịntanetị "Mmezi nke ọgụgụ" na-arụ ọrụ!2020-06-012020-06-02http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/06/3.png200px200px
Mmalite nkwalite ọgụgụ: nke (n'efu) ngwaọrụ iji, larịị site na ọkwaDSA
Dyslexia na ịmụ BekeeLearningmụta, DSA